ကံကြမ္မာဖေးမ၍ကျွန်တော် ကို နာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတုန်း Myanmar Egress က UN , ASEAN , Myanmar NGO ပေါင်းစီးထားသော VTA ဟုခေါ်သော project တစ်ခုတွင် logistics တစ်ယောက်အနေနုင့် တာဝန်ပေးခဲ့ တယ်လေ။ နာဂစ်ဒဏ်ခံရတဲ့ မြို့ တွေဆီပေါ့။ အဲဒီ VTA project က ရည်ရွယ်ချက်ကအတော်ကောင်းတာပေါ့။ယူနုိူက်တတ်နေရှင်း ၊ မြန်မာအစိုးရ နဲ့ အင်ဂျီအို တို့ရ ပထမဆုံး ပရောဂျက်ကြီးပေါ့။ ဒီပရောဂျက်မှတဆင့် မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးကို သုံးဖွဲ့ပေါင်းပြီး အတူတည်ဆောက်ကြမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တကယ်အလုပ်လုပ်ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ထင်သလိုမဟုတ်ဘဲ UN အရာရှိတွေလုပ် ဆောင်ချက်က ကျွန်တော်တွေးထားတာနဲ့ တလွဲကြီးဖြစ်နေတဲ့ အခါ...........
ကျွန်တော်နဲ့အတူတာဝန်ကျတဲ့ UN Officer က အမေရိကန်ကနှစ်ယောက် ၊ အစိုးရအရာရှိ ( ၄ ) ဦး ( ဒါရိုက်တာ အ ဆင့်တွေ ပါ ) ၊ ဘာသာပြန်လိုလို ကိုအော်ဒီနိတ်တာလို လိုတစ်ဦး နှင့် ဆာဗေယာ ( ၃၀ ) လောက်ပါပါ တယ်။ ဇက်လမ်းကဒီမှာစတောာ့တာဘဲ၊ အဲဒီသုံးယောက်ကတော်တော်ပါဝါရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လော်ဂျစ် စတစ်တွေက သူတို့ (၃) ဦးနဲ့ ဆာဗေယာတွေ လိုအပ်တာဖြည်ံဆည်းပေးရမှာ ဥပမာ လှေ၊ ကား (အမယ် ဖိုးဝီုး ဆလွန်းကားဆိုဘဲ၊ နယ်မြို့မှာ ဒီလိုကားမျိူးတွေ ရှားတယ်ဗျာ။ဲ NGO က ဒီလိုညွန်ကြားထားတာ ပါ ။ အဲတာကU N ဘက်က လာတဲ့လူတွေလေ၊
အစိုးရဘက်ကတော့ ဒါရိုက်တာ (သို့ ) ဒုဦးစီး စသည်ဖြင့် (4)ဦးလောက် ပါကြတာပေါ့၊
NGO ဘက်ကတော့ survey ကောက်မဲ့ လူငယ် (၂၀ (သို့ ) ၃၀ ကျော် တမြို့စီမှာ ထည့်ပေးရတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း NGO က logistics အနေနဲ့ ဒီNGO က ပဲရွေးချယိပြီးပို့ပေးတာပေါ့၊ကျွန်တော်တို့ကအရင်သွားနှငိ့ပြီး ကားတို့ လှေတို့ ဒီပရောဂျက် (၁၀ ) ရက်အတွတ် ကြို ငှားထားရတယ်လေ။ ပြီးတော့ UN officers တွေ ၊ အစိုးရအရာရှိတွေ နဲ့ ဆာဗေယာတွေအတွတ် နေစရာရှာပေးထားရတာပေါ့၊ အလွန်ဟိတ်ဟန်များတဲ့ UN က အရာရှိတွေအတွတ် တိုက်တစ်လုံး ၊ကားနှစ်စီး ငှားပေးထားရတယ်လေ။ ဆာဗေယာတွေအတွတ် ကားနဲလှေက အဆင်ပြေသလို စီစဉ်ပေးရတာပေါ့။ ပုံသေတော့မဟုတ်ဘူး။ အစိုးရအရာရှိတွေအတွတ် တည်းခိုခန်း ရှာပေးရတယ်လေ။ သူစရိတ်သူရှင်းပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ UN officers တို့အတွက် တိုက်တစ်လုံး ( တစ်လစာ ) ငှားပေးတယ် နောင် ပြီး ကားနှစ်စီး ( ဖိုး.ဝှီး ) (၁၀) ရက်စာငှားပေးထားရတာပေါ့။ ဒိနေရာမှာတင် UN project ကို ကျွန်တော် တော် တော် စိတ် ကုန်သွားတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဗျာ ။ UN ရယ် ၊ မြန်မာအစိုးရ ရယ် ၊ အင်ဂျီအို ရယ် အတူတူပူးပေါင်းပြီး သာတူညီမျှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ကိစ္စ မှာ ( သူတို့ဒီလို ကြွေးကြော်ခဲတာပါ )။ကျွန်တော်တို့က UN officers တွေကိုဖူးဖူးမှုတ်ထားပြီး ၊ ကျန်တဲ့ သူကို လှည့်မကြည့်ဘဲထားရမယ်တဲ။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ အရာရှိ တွေကိုပေါ့။ကျွန်တော် တပ်မတော်အစိုးရကို မကြိုက်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ခွဲခြားတာတော့မကြိုက်ဘူး။ ဒီအရာရှိတွေကလည်း နာဂစ်မှာလူတွေတော်တော် ဒုက္ခ ရောက်လို့သာသီးခံနေတာ ပါ။စိတ်ထဲကတော့ကြေနပ်ပုံမပေါ်ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် တကယ်ပါ။
ကိုယ့်မြန်မာလူမျူိူးကို လာနှိမ်သလိုခံစားခဲ့ရတာပါ။ ဘာကောင်တွေမှန်းမသိပါဘူးစိတ်လေတယ်။ ဒီကြားထဲ ဆာဗေယာတွေက တမှောင့် သူတို့ကလည်း UN အားကိုး နဲ့ တောင်းဆိုချက်များမှများ ။သူတို့က ဒီလိုတောင်းဆိုကြတော့ ကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်ပါရဲ့လားလို့။ တ ကယ်လို့ ကျွန်တော်နေရာနမှာ စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက်ဆိုရင် သူတို့ ဒီလိုတောငိးဆိုရဲံမလားသိချငိလိုက်တာ။ ဒီမိုကရေစီက ကျွန်တော်တို့ကို demanding person (သူတို့လို )ဖြစ်အောင်တွန်းပို့မှာလား။ ကျွန်တော်တို့ ကရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်တော့ ဒီစနစ်နဲ့အဆင်ပြေပါ့မလား။demanding person ဖြစ်မှ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားမှာလား။
ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စတွေပြီးတာနဲ့ UN ကိုအထင်မကြီးတော့ပါဘူး။
သူတို့ ( project မှာတာဝန်ကျသော UN officers )က ပရောဂျက် (သို့) ရည်မှန်းချက်အောင် မြင်ရင် ဘယ်နည်းလမ်းမဆို ကောင်းတယ် ( the end justifies the means ) ဆိုတဲ့ ၁၅ ရာစု အီတလီ တွေးခေါ်ပညာရှင် မက်ခီရာဗယ်လီ ရဲ့ဆိုရိုးအတိုင်း follow လိုက်နေသလိုဘဲ။ငါတို့ ပရောဂျက် အောင်မြင်ဖို့ အတွတ် မင်းတို့ အင်ဂျီအို တွေက ကန်ထရိုက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေး ။မလုပ်ပေးနိုင်ရင် ငါတို့အပြစ်မဟုတ် မင်းတို့တာဝန်မကျေလို့ ဒီရလဒ်ထွက်လာတာ စသည်ဖြင့် ယူဆနေသလိုဘဲ။ တော်ပါ ။လိမ့်လိုက်တော့ မောင်းမင်းများ ။
ဤပိုစ်ဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခံ၍ နာဂစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ကူညီခဲ့သောမြန်မာအစိုးရအရာရှိများအား အနူးအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
Posted by sealover at 9:53 AM No comments:
ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာ သစ်ပင်တွေကိုမြင်တက်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ သစ်တောကြီးတစ်ခုလုံးကိုငှက်တစ်ကောင်အလားမြင်တတ်တယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါးတစ်ရံ ချစ်သူကိုပဲကွက်ပြီးမြင်တက်တာ ပေါ့။ အဲဒါတွေကကျွန်တော့ ကိုယ်ပိုင်သုံးဖက်မြင်ပေါ့။ ဒီ တော့ကာ တစ်စုံတစ်ဦးဟာဒိုင်းမစ်ရှင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် သုံးပုံတစ်ပုံပဲမှန် ပါလိမ့်မယ်။ရပါဒယ်။
ကျွန်တော့အတွက်တော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကို မော်ဒန်ကကြိုးတွေနဲ့ကို ညိုပစ်ချင်တယ်။
Posted by sealover at 8:53 AM No comments:
i'm deeply apologized to those who came across in my blog , hoping great expectation to read & share their idea. moreover , my poor writting-style. i want u forgive for my miserable post & design. i've to learn lots of blogging from internet. as i have no friends who rablogger. i run my blog on my own feet. i've never attended any of computer class & others. so if my blog doesn't meet ur eyes so forgive me, adding your sacrificing sense to shape this particular blog. i' m all the time warmly welcome to u & ur atmosphere.
Posted by sealover at 10:51 AM No comments:
contract culture betwdeen employee & employer
it's modernized in this time of our country now, supposing to build mutual relation between them ,to the purpose of increasing their relevant company's profit. but when it doesn't meet our culture,happy go lucky good, none can tell what wrong on this modernized culture.both of them have already known that we don't feel like to go any court & facing court, weather good or bad, is our sort of fear in-bornly. we have to culture it to get in to meritocracy. otherwise , we r likeaschool-boy who never pass his present grade.i may not be going too far , if i said like that . will u pleased to my opiniom?
Posted by sealover at 10:57 AM No comments:
how r u ? i' glad to see giving ur time to watch my blog.
i wish u'll be safe & sound.now i 've no post to upload. i can't also type in burmese .i want u to forgive me for that small case.
but later i will have to post in burmese in order to shatre our idea on every topic.
i never think my-self asaknow-all-attitude guy. would u mind copying ur idea in my blog.
Posted by sealover at 9:12 AM No comments: